Home Diinta Wararka News In Englsih Suugaan Multmedia Sports News Contact Us AL-SHABAAB,TOWXIIDKA, SHAREECADA IYO MUSLIMIINTA. W/Q: MAXAMED NUUR SHIREViews: 399
Fri, May, 11-2012
Towxiidka waa kalmadda furaha u ah Islaamnimada, macnaheeduna waa, in cid xaq lagu caabudo ayan jirin Illaaha weyn maahee, qeybta kalena waa, in Nabi Muxamad loo qiro inuu yahay rasuulkiisa. qofku marka uu intaas ku dhawaaqana waa qof Muslim ah oo Illaahay rumeeyey, wixii intaas ka dambeeyana waxaa laga rabaa inuu la yimaado ficiladii kale ee Muslimiinta laga rabay, sida Salaadda, Zakada, “ciddii awoodda” Soonka, iyo Xajka, qofkii intaas la yimaadana waa Muslim dhiiggiisa iyo maalkiisa in la nabad galiyo la doonayo.
Shareecada Islaamka waa qaanuun dhameystiran oo Illaahay ugu talagalay inay aadanuhu weheshadaan inta ay adduunka saaran yihiin, iskuna dhaqaan, isla markaasna ay ku jirto danta aadanaha adduun iyo aakhiroba.
Muslimiintu waa dadka qiray kalmadda Towxiidka, ka dibna ku daray falalkii kale ee Islaamku amray, sida Salaadda iyo Soonka, Zakada iyo Xajka ciddii awoodda, 5 taas tiirna waa kuwa ay ku taagan tahay Islaamnimada.
Al-Shabaab iyo Taageerayaashoodu Kalmadahaasi sidee u isticmaalaan?
Kalmadda Towxiidka ee furaha u ah Islaamnimada, sidaas waa u yaqaanaan, laakiin waxaa jira macnayaal kale oo ay si gaar ah ugu adeegsadaan, taasoo cidda aan ku raacin ay ku sheegaan cid aan fahmin towxiidka, waaba haddii ayan diinta Islaamka ka saarine, waxaana ka mid ah:
Jiritaanka Jihaadka , ma ‘ahan mid ay doodi ka taagan tahay Muslimiinta dhexdooda, balse waxa muranka ugu badan ka jiraa ee Al-Shabaab iyo ururada la aragtida ah lagu diiddan yahay ayaa ah, noociyadda Jihaadka iyo shuruudihiisa.
Haddii aan taas isla fahanno, Al-Shabaab iyo inta ku aragtida ah ayaa waxa ay qabaan, ciddii arimahaasi kala doodda ama ku diidda, in ayan Towxiidka fahmin, marka aad maqashid hebel towxiid ma fahmin ama koox hebla, yeyan kaa hoos bixin Towxiidka la fahmayo ma ahan kii caadiga ahaa ee aad taqaanay ee waa, sida ay Towxiidka u fahansan yihiin oo ah, noociyada Jihaadka aan lagu raacsaneyn ciddii aan ula fahmin sida ay rabaan.
Sheikh Jaamac C/salaam oo ka mid ah culimada hadda la dhacsan fikirka aan ka hadlayo, ayaa bisihii 4-aad ee sanadkii 2010-kii, mar uu ka hadlayey masaajid ku yaala magaalada Muqdisho, waxa uu sheegay in culimada Ictisaam ayan fahmin towxiidka. isaguna uusan horey u fahansaneyn, taas macnaheeda waxaan filayaa inay caddahay waxa uu Towxiidka ka wado.
B-Col iyo Saaxiib
Marka ay halkaan joogto, Al-Shabaab iyo ururada la halmaala, mar kale ayey isticmaalaan ereyga ah ” Towxiidka lama fahmin” waxay ka wadaan :ciddii aan col la nahay la colow, ciddii aan saaxiib la nahayna la saaxiib, haddii kale towxiidka ma aadan fahmin: macnahan oo dhameystiran qodobka kale ee Muslimiinta baan ugu tagi doonaa.
Shareecada Islaamka ee aan kor ku soo sharraxnay, taasoo muslimiinta laga rabo inay hirgeliyaan, waa mid dhameystiran, mana ahan shareecada Islaamka in lagu koobo waxyaabo dhowr ah. Soomaalidu waa Muslimiin waa ku dhasheen shareecada, kuna dhaqmaan in badan, waxna waa ka dhiman yihiin u baahan in la dhaqan geliyo.
Shareecada ay Al-Shabaab u dagaalamayaan hirgelinteeda, waa shareeco ay shuruudo laba ah ku xiran yihiin, waxayna kala yihiin labada shardi:
1- In Shareecada loo hirgaliyo sida ay u fahansan yihiin, looguna dhaqmo.
2- In cidda hirgelineysa ay iyagu noqdaan oo cid kale ayan shareecada wax ku maamulin.
In Shareecada loo hirgeliyo sida ay u fahansan yihiin waxaan ka wadaa, dadka Muslimiinta ah waxaa jira aragtiyo u dhexeysa, gaar ahaan furuucda, ama fahanka, sidaas daraadeed waxaa jira madaahib iyo aaraa culimadu kala qabaan kuwii hore iyo kuwa dambe, mas’alo ijtihaadi ah ayaa noocyo kala duwan loo kala arkaa, marka iyagu waxa ay doonayaan in aragtidooda ay noqoto midda lagu saleynayo Shareecada Islaamka, taas xagga u tuur.
Midda kale Al-Shabaab cid kale lama doonayaan inay Shareecada hirgeliso, waxaana tusaale u ah:
Xarakada Al-Shabaab cid aan iyaga aheyn ma dooneyso inay Shareeco wax ku maamusho, waxaana tusaale u soo qaadan karnaa ururkii Xisbul Islaam ee ay arimaha badan isku raacsanaayeen inay ula dagaalameen meelo badan in ay Shabaab ku soo biiraan oo shareecada cidda wax ku xukumeysa ay noqoto oo kaliya Al-Shabaab, haddii la dhaho midnimaa la raadinayey, sax Muslimiinta waa laga rabaa inay mid ahaadaane maxaa loola dagaalamay iyagaaba diyaar u ahaa midnimada oo ku baaqayaye? haddii la yiraahdo dagaalkii Kismaayo waxaa lala galay Axmed Madoobe oo hadda Kenya la socda, kii Buurhakaba yaa lala galay, mase C/qaadir Kumaandoos baa asna meel kale ku xirnaa?.
Bulsho ama qof marka Muslim la dhahayo, waan soo marnay oo kuma laabanayo, inta badanna dadku waa yaqaanaan, balse halka aan u socda adna aad iga dhowreyso waa qolyaha aan ka hadleyno Muslimiin yey ka wadaan? si aad jawaabta su’aashaas iila wadaagto wax yar u dul qaado qormadan:
Ma maqashay ereyadan?
Muslimiintii baa la baabi’iyey.
Muslimiintii baa la dhibaa
Ahlu Towxiidkii baa baxsan la’
Macnaha waxaa weeye iyagaa isku wada, dabcan iyagu Muslimiinta ayey ka mid yihiin, in muslinimadooda loo dhibana sax maaha, balse meel ay muslimiin iyaga ka badan ku nool yihiin oo dhul islaam ah, wax dhib ahna ay muslimiinta guud ku qabin inay dhahaan Muslimiin baa lagu dhibaa macno kale u garan maayo aan ka aheyn in Muslimiinta ay sheegayaan ay iyaga iska wadaan, gaar ahaan marka loo dhibo arimaha ay muslimiinta guud isku diiddanaayeen. waxaaba halkaas laga yaabaa in kali-muslinnimo ay muuqato, laakiin hadda macnahaas uma jeedo, iyagana walow ay ka muuqato haddana waxay sheegaan inayan sidaas aaminsaneyn, in loo tixgeliyana waa ila wanaagsan tahay.
Al-Shabaab, iyagu shareecadii maaha oo ciddii iyaga la colowda shareecada inay col la tahaykamadhalaneyso. sidoo kale iyaga Muslimiinta oo dhan ma matalaan, meel iyaga lagu doortay oo umadda inay hoggaamiyaan loogu wakiishayna majirto, waa dad muslimiinta ka mid ah, sax iyo qaladna leh, su’aalo badanna waxaa ay ka furan yihiin halka ay umadda ku wadaan, wax yar su’aalahan ila fiiri.
1- Koox muslimiinta ka mid ah ma u babac dhigi kartaa gaalo oo dhan iyo inta badan muslimiinta?
2- Gar miyaa in Soomaalida lagu tijaabiyo arimo culculus oo ayan ka bixi karin, inta badan dadkuna ay fashil u arkaan?
3- Intii 20 sano iyo ka badan ka dib laga shalaayi lahaa falal aan faa’iido badneyn, sow gar maaha in marka la nabad qabo aan lagu dhaqaaqin?
4- Haddii dadka diinta bartay badankoodu diinta xagal-daacinayaan yey yihiin dadka koryeelaya?
5- Haddii dhulkii kale ee Soomaalidu deggeneyd la leeyahay halaga soo Hijroodo dadkii muslimiinta ahaa ee ku noolaana ay doodi ka taagan tahay xukunkooda, yey kooxdani dartood u baaba’ayaan ma cid ay gaalo u arkaan iyo dhul ay waddan gaalo u arkaan bay daraadood u dhamaanayaan?
6- Haddii xiligan la leeyahay inta badan umaddu maanta Towxiid ma fahmin goorma ayaa dadku towxiidka fahmayaan, dad intiisa badan ayan towxiid fahansaneyna sidee Jihaad looga dhaadhicin karaa?
7- Haddii intii saaxiibada ahaa ay isku haystaan arimahaasi masiiriga ah goorma ayaa bulshadii kale sida aad wax u dooneyso uga gadeysaa, goorma ayaase caalam kale u gudubtaa?
8- Qofkii su’aalahaasi keena ma murtad baa, mase waa mufsid dil mudan?
9-Haddii Nabi Muxamad (SCW) kabarinoqonayey qaar ka mid ah ficiladii ay saaxiibadii sameeyeen, maxaa loo maqli waayey Al-Shabaab oo ka cudur daaranaya wax ay haleeyeen?
10- Akhristaha qormadanow waligaa ma maqashay ficil hebel oo ay Al-Shabaab sameeyeen oo ay cambaareynayaan madaxda xarakadu, mase 5 sano iyo ka badan ururku maba qaldamin weli?
11- Qof mulim ah wax ka sheegiis ma lagu gaaloobaa?
12- Koox muslimiinta ka mid ah wax ka sheegeed malagu gaaloobaa?
13- Muxuu yahay waxa u dhexeeya qof muslim ah iyo koox muslimiinta ka mid ah?
Towxiidku waa albaabkii laga soo galayey Islaamnimada, cid gaar u leh oo gooni uga sheegan karta dadka kalena majirto, Musliinta oo dhan ayuuna u dhexeeyaa haba kala badiyaane, haddii ay sidaas tahay, sax ma ahan in koox gaar ah si ay u fahansan tahay laga dhigo sidii saxda aheyd ee aan la khilaafi karin.
Shareecada Islaamka waa wax laga rabo qof walba inuu isagu ku dhaqmo, waxaana ka mid ah ku dhaqankeeda, salaadda oo la toosiyo, soonka, zakada iyo Xajka oo la guto ciddii awoodda, dhiiga muslimka oo la dhowro, xanta oo laga tago, muslimiinta oo loo turo, cilmiga oo la barto, waaliddiinta oo baarri loo noqdo, wanaagga oo dadka si xikmad leh loogu sheego xumaanta oo dadka laga reebo, “haddii xumaanta la reebayo ayan ka dhalaneynin xumaan ka badan”, dalka oo si guud ay uga muuqato sharaa’irta Islaamka, masaakiinta oo la caawiyo, dadka waaweyn oo la ixtiraamo, dariska oo xaqooda la ilaaliyo, in lagu dadaalo intii ciqaab laga baqi lahaa in dadku xumaanta qanaacadooda isaga dhaafaan, ka dib marka lagu wacyi geliyo , ciddii intaas oo dhan wax ku qaadan weyda oo sidii shareecadu tiri garab-marta, lana timaadda wax xad keensanayana sidii shareecadu tiri la mariyo, iyadoo aan xadka loo fulineynin anaa kaa xoog weyn, ee maxkamad iyo cadaalad la marayo, loona fulinayo xadka si weliba waafaqsan wanaagga iyo naseexada ee aan la coleytan iyo ku xumeyn aan laga wadin. arimahaasi iyo kuwa kale oo badan ayaa ka mid ah Shareecada Islaamka ee wanaagga badan.
Muslimiintana, waa kuwa intaas rumeysan kuna dhaqma, cid walba meel ha u joogtee, waxaa ka mid ah: mid naftiisa dulmiyey, mid dhexdhexeysta, iyo mid u hormara kheyraadka, Muslimiintuna ma ahan koox gaar ah.
Haddaba akhristaha mudnaanta lahow, waxaan filayaa inaan isla fahannay macnaha laga wado 3-da erey ee aan jeexjeexnay, anigoo ku kalsoon in dad badan oo qormadan akhrin doona ay ku baraarugsanaayeen aniga hortay.
mnuur10@gmail.com Thank you for visiting our web page
Geeridii ku timid Marxuum Sh Abdihamiid Sh. Nuur
Qaraxyo lala beegsaday kooxda Al-Shabaab
Al Shabaab oo sheegtay inaysan hergaleyn lacagta cusub.
Muhannad Xaad Geelle & Maxamed Xaad Geelle
Cawil Kamas Iyo Shukri Maxamed oo wiil ugu dhashay Burtinle
Halkee Mareysaa Dacwadii Gen Maxamed Cali Samatar? (Warbixin)
Shabaab ayaa sheegatay qaraxyada Kampala
Nin Soomaali ah oo looga shakiyay Al Shabaab oo lagu xiray Dalka Holland
Ciidamada Dowladda oo la wareegay Fariisimo ay Shabaab ku sugnaayeen
Guurka iyo Faa'iidada uu uleeyahay ummada Islaamka Views: 87702
10-ka kooxood ee sports aduunka ugu qanisan.. Views: 52729
Talo bixin khusaysa soo afjarida burcad badeednimada Somalia Views: 14935
Jacayalku waxaa uu u qaybsamaa Sadex qaybood Views: 12906
Taariikhdii Xaaji Diiriye Allah Ha u naxariistee Views: 12179
Sawiro Cusub oo naga soo gaaray Masjidka Xaarxaar Views: 9621
Tarriikhdii Carays Ciise Kaarshe Views: 9141
Tilmaan Gaaban baan awrtablow idin tusaaleyne, Gabay Views: 7776
Waa Book Cusub oo lamagac baxay Ahmed iyo Nasiib Views: 7167
Muwaadinka Koowaad, Guulayste, Mudane, Mohamed Abdi Yusuf Views: 5980